CAD / GIS का लागि जोनम को सर्वश्रेष्ठ - Geofumadas
मे, 2011 कार्टोग्राफी, गुगल अर्थ / नक्सा, जीपीएस / उपकरण, इन्जिनियरिङ
Zonum Solutions एउटा साइट हो जुन एरिजोना विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले विकसित उपकरणहरू प्रदान गर्दछ जुन आफ्नो खाली समयमा CAD उपकरणहरू, म्यापि and र इन्जिनियरि to विशेष गरी किमी फाइलहरूसँग सम्बन्धित कोड कोडमा समर्पित थियो। सायद यसले के लोकप्रिय बनायो कि त्यो नि: शुल्कको लागि प्रस्ताव गरिएको थियो, र यद्यपि तिनीहरू मध्ये केही डेस्कटपमा दौडेको म्याद सकिने मिति थियो, अरूहरू केवल गुगल अर्थको अघिल्लो संस्करणहरूसँग चल्दछन्, केहि अझै मान्य छन् र पक्कै पनि, ती अनलाइन काम पूर्ण रूपमा छन्। उपलब्ध छ।
यहाँ मैले Zonums.com मा उपलब्ध नजिकैका 50 अनुप्रयोगहरूको सारांश प्रदर्शन गर्दछु, यद्यपि यो केही वर्गीकृत गर्न जटिल छ, किनकि उनीहरूले स्थापना गरेको एक भन्दा बढी विभाजनमा आवेदन गर्दछ, यो साइटमा अवस्थित सबै कुराहरूको सारांशको अन्त्य गर्ने प्रयास हो।
Google Earth र Google नक्साको लागि उपकरण
Cगजल: गुगल नक्शामा विषयवस्तुको लागि अनुमति दिन्छ, देश वा छनौटको क्षेत्र। तपाईं र division्ग प्रशासनिक डिभिजन, सेन्ट्रोइड र समोच्च मोटाई परिभाषित गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि गुगल अर्थमा यसलाई खोल्नको लागि केएमएल कम गर्नुहोस् (OpenGL मोडमा)। धेरै जसो परीक्षणहरूमा मैले एउटा बग भेट्टाँ जुन अमेरिकी राज्यको चयनलाई परिवर्तन गर्दैन।
DigiPoint: यस उपकरणको साथ, तपाईं Google नक्सामा अंकको एक तह कोर्न सक्नुहुनेछ। दृश्यको प्रकार छनौट गर्न सकिन्छ, साथै यदि हामी पोइन्टहरू लाट / लोन वा यूटीएम निर्देशांकमा देख्न चाहन्छौं; साथै आइकनको प्रकार, र color्ग, तहको नाम कन्फिगर गर्नुहोस् र यदि हामी यसलाई २ डी वा थ्रीडी मा चाहान्छौं। त्यसो भए फाईललाई केमिएल, सीएसभी, किमीएल, जीपीएक्स, डीएक्सएफ, टीएसटी, ब्ल्यान वा ट्याबमा निर्यात गर्न सकिन्छ।
ई-क्वेरी: गुगल अर्थको आधारमा समन्वयित उचाईहरू निकाल्नुहोस्। यो गर्न यदि हामीसँग निर्देशांकहरूको सूची छ भने या त ल्याट / लोनमा वा यूटीएममा, हामी ती फाइलहरू आयात गरेर वा प्रतिलिपि / टाँसेको माध्यमबाट प्रविष्ट गर्दछौं। त्यसो भए, हामी विभाजक (अल्पविराम, ट्याब, ठाउँ) को प्रकार परिभाषित गर्दछौं, र जब एलिभेसनका लागि खोजी बटन थिच्दा, प्रणाली गुगल अर्थ आधारमा जान्छ र सम्बन्धित z समन्वय प्राप्त गर्दछ। त्यसो भए तपाई gpx, csv, txt वा ट्याब ढाँचामा फाईल डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
एउटा महान उपकरण, जुन Google धरतीको स्तरमा आधारित भू-भाग मोडेल सिर्जना गर्न उपयोगी हुन सक्छ, एक मार्ग को ऊंचाई को गणना गर्नुहोस जसबाट हामी केवल xy को समन्वय गर्दछ या कुनै 2D लेयर 3D मा परिवर्तित गर्छन।
GpxViewer: यो एक धेरै व्यावहारिक उपकरण हो जुन गुगल नक्सामा जीपीएक्स ढाँचामा जीपीएसको साथ लिइएको फाईल प्रदर्शन गर्दछ।
Epoint2GE: यो उपकरण डेस्कटप स्तरमा काम गर्दछ, र एक एक्सेल फाइलबाट निर्देशिकाहरू एक किलोमिटरमा रूपान्तरण गर्दछ जुन गुगल अर्थ द्वारा पढ्न सकिन्छ। यस अनुप्रयोगको सब भन्दा बहुमूल्य चीज भनेको यो हो कि यसले तपाईंलाई कक्षहरूको दायरा रोज्नको लागि अनुमति दिन्छ, निर्देशा found्कहरू फेला पर्ने क्रममा, यसले स्वीकार गर्दछ कि तिनीहरू भौगोलिक (दशमलव) वा यूटीएम र प्रतीकमा छन्। हो, डाटा WGS84 मा हुनु पर्छ, किनकि यो गुगल अर्थ द्वारा प्रयोग गरिएको एक हो। जबकि यो अनुप्रयोग अब उपलब्ध छैन, तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ Geofumed टेम्पलेट जो UTM समन्वयबाट एक किलोमिटर उत्पन्न गर्दछ।
GE-जनगणना एक्सप्लोरर: यस उपकरणले संयुक्त राज्य अमेरिकाको जनगणना डाटाबेसमा टाँस्यो र २ र dimen आयामी विषयगत तहहरू सिर्जना गर्न सजिलो बनाउँदछ। यो डेटाबेससँग मात्र काम गर्दछ, तर यो उदाहरण हो कि कोड ज्ञानको साथ कोही अर्को डाटाबेसमा अनलाइन रहन प्रयोग गर्न सक्दछ।
GE-Extent: यो एक दिनचर्यासँग सम्बन्धित छ, जुन एक PHL ठेगाना एक किलोमिटरमा सम्बन्धित गरेर, Google Earth मा देखाईएको हप्ता क्याप्चर गर्दछ र यसलाई विस्तारको रूपमा फर्काउँछ। यो धेरै उपयोगी हुन सक्छ, जस्तै सँगै जोड्नको लागि स्टिचमैप्स वा जब हामी स्क्रिन कैप्चर गर्न जाँदै हुनुहुन्छ त्यसपछि तिनीहरूलाई भूगोल कोनों को समन्वय को सम्बन्ध मा; यो कस्तो हुन्छ जस्तो जीपीएस भिजुअल.
GE-UTM: यो उपकरण विगतको जस्तै हो, दुबै सञ्चालन र निर्माणमा। भिन्नताका साथ यसले के खडा गर्छ भन्ने एक विशिष्ट बिन्दुको UTM समन्वय हो।
MapTool: यो एक अनलाइन दर्शकमा केन्द्रित उपकरणहरूको सेट हो जसले एक क्लिकलाई दृश्यको प्रकार चयन गर्न अनुमति दिन्छ, "fly to" विकल्प सहित जसलाई तपाईं एक विशिष्ट UTM समन्वयमा वा भौगोलिक क्षेत्रमा जान सक्नुहुन्छ।
उपलब्ध विकल्पहरू बीच डिग्री, मिनेट र सेकेण्डमा साथै दशमलव र UTM मा ल्याट / लोन डाटा प्रदर्शन गर्दछ।
एक बहुभुजको बहु रेखा र एक रेखामा सीधा रेखामा दूरीको विभिन्न एकाइहरूको साथ गणना गर्न यो पनि सम्भव छ। यसले दुई दिशाहरूको बिच मार्ग पनि गणना गर्दछ र मीटर र खुट्टाहरूमा विशिष्ट बिन्दुको उचाइ प्रदर्शन गर्दछ।
किलोमिटरको अन्य ढाँचाहरूमा रूपान्तरित।
यी चार लुगल उपकरणहरू हुन् जसले तपाईंलाई किमीएल फाइलहरू dxf, shp, txt, csv, ट्याब र gpx मा रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ। पछिल्लो अनलाइन काम गर्दछ।
Kml2CAD (kml सम्म kmx)
अन्य उपकरणहरू वा अप्रचलित काम गर्दै गुगल धरतीको अघिल्लो संस्करणहरूमा
निम्न Google धरतीको नवीनतम संस्करणहरूसँग नलगाउनुहोस्, तर हामी उनीहरूको रचनात्मकताले उल्लेख गर्दछौं, यदि कसैले तिनीहरूलाई उपयुक्त संस्करणहरूमा प्रयोग गर्न वा केवल त्यहि उपकरणको काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि विचारहरू सिर्जना गर्न चाहन्छ भने।
GES: यो उपकरण होइन, तर ग्राफिक हो जसले हामीलाई गुगल अर्थ द्वारा प्रयोग गरिएका सबै प्रतीकहरू देखाउँदछ, उनीहरूको संख्याको साथ। जुन परिचयकर्ता र छविसँग संघर्ष नगरी किमीएल फाइलहरू अनुकूलित गर्नका लागि आदर्श हो।
GE-Symbols: यो पहिलेको जस्तो देखिन्छ, यो अनलाईनमा काम गर्ने फरकको साथ, र बटन थिच्दा उनीहरूले स्क्रिप्ट कार्यान्वयन गर्छन् जसले कोड देखाउँदछ। हालसालै मैले यो तालिका तल रहेको देखेको छु।
म्यापलप्लेटहरू: यी कोडको एक्सएमएलमा वर्णनहरू हुन् जुन विशेष नक्सा प्रदर्शन वा Google नक्सामा जोडीहरूको प्रविष्टि जस्ता पक्षहरूमा लागू गर्न सकिन्छ। अभ्यासमा मैले Google नक्सामा युआरएल प्रविष्ट गरेर त्यस्ता म्यापलेटहरू प्रदर्शन गर्न ब्यवस्थित गरेको छैन।
ZMaps: यो विभिन्न Zonum उपकरणहरूको लिंकको संग्रह हो। यस खण्डमा प्रायः उही व्यक्तिहरू सारांशमा छन्।
zGE-toolbox: यो गुगल अर्थ एपीआईमा विकसित उपकरणहरूको पूर्ण सेट हो, दुर्भाग्यवस यो वर्तमान संस्करणहरूको डाइरेक्टएक्सको लागि अपडेट गरिएको थिएन। जहाँसम्म यो जान्न योग्य छ कि यसले चीजहरू गरे जस्तै: सर्कल ड्राइंग, सेक्शन कटि cutting, प्रतिलिपि / टाँस्ने, निर्यात र गुगल अर्थमा सिधा डिजिटलीकरणका अन्य तरिकाहरू।
कार्टोग्राफी र CAD फाइलहरूको लागि उपकरण
यसले डेटा परिवर्तनको सामान्य सामान्य मार्गहरू समाधान गर्दछ र dxf फाइलहरू बीचको अन्तरक्रिया।
Cotrans: लाइनमा समकक्षहरूको रूपान्तरण।
Ectrans: तालिकाहरूबाट समन्वयहरूको रूपान्तरण।
GVetz: यो कहिल्यै बनाइएको थिएन।
Cad2xy: Dxf फाइलको गुणहरू निकाल्छ।
EPoint2Cadनिर्यात एक्सेल बिन्दुहरू AutoCAD मा।
xy2CAD: Xy coordinates बाट एक dxf सिर्जना गर्नुहोस्, अनलाइन।
आकार फाइलहरूको लागि उपकरण
निम्न उपकरणहरू हुन् जसले shp फाईलहरूलाई विभिन्न ढाँचामा रूपान्तरण गर्दछ, txt, dxf, gpx, र किमी सहित। धेरै तपाईंलाई लक्ष्य युनिटहरू र विशेषताहरूको कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छ, यो आवश्यक छ कि कम से कम .shp, .shx र .dbf फाईलहरू अवस्थित छन्।
Epanet को लागि उपकरण
यी मध्ये तिनीहरूले पहिले नै बोलेको थियो एकपटक, कम से कम Google धरती संग सम्बन्धित, तर यो सूची अनुसार अधिक छन्।
Epa2GIS: Epanet बाट आकारफाइलबाट निर्यात।
EpaElevations: सञ्जालमा नोडहरूमा उचाईहरू असाइन गर्नुहोस्।
EpaMove: यस विकल्पको साथ, जसले अनलाइन काम गर्दछ, पूरै नेटवर्क मूल र डेल्टाएक्स / डेल्टा वाइन्टबाट सार्न सकिन्छ। बाँकी स्वतः गणना गरिन्छ।
EpaRotate: अघिल्लो जस्तो मिल्दोजुल्दो छ, तर के यसले नेटवर्क रोटेट गर्दछ। जियोररभेन्स्ड नभएका प्रणालीहरूको लागि आदर्श।
EpaSens: यो नेटवर्क गणनाहरूको लागि हो, पाइप लाइन व्याससँग खेल्न र विभिन्न नोडहरूमा यसको प्रभाव हेर्नको लागि सक्षम हुन।
EpaTables: यसले एक EPNET फाईल सन्दर्भमा csv फाईल सिर्जना गर्दछ। भल्भहरू, ट्या ,्कहरू, पाइपहरू, इत्यादिहरूको विवरण संख्या।
Excel2Epa: यो एक्सेल VBA को बारे मा एक macro छ, जो एक .epa फाइल को समकक्ष संग बिंदुहरु निर्यात गर्दछ
Gpx2epa: यस दिनचर्याको साथ, gpx ढाँचामा जीपीएसको साथ लिइएको एक फाइल Epanet मा परिवर्तित गर्न सकिन्छ।
MSX-GUI: अर्को स्मोक्ड
Net2Epa: यो उपरोक्त वर्णन गरिएको उपकरणको भाग हो, जसमा तपाईँले बिन्दुहरू Google नक्सामा चिन्ह लगाउन सक्नुहुन्छ र Epanet ढाँचामा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
Zepanet: यो उपकरण विकसित गरिएको छैन।
Epa2kmz: एप्यानेट फाइलहरू Google धरतीमा रूपान्तरण गर्नुहोस्।
Epanet Z: यो सर्वोत्तम हो, एप्यानेटमा Google नक्सा, याहू वा बिंग नक्शा तह लोड गर्न अनुमति दिन्छ।
EpaGeo: यसले एप्यानेट फाइलहरूमा परिवर्तनहरू एकाइहरू जस्तै इकाइहरू र समन्वय प्रणालीमा अनुमति दिन्छ।
Shp2epa: एसपीपी फाइलहरू Epanet मा रूपान्तरण गर्नुहोस्।
यो हाइड्रोलिकल डिजाइन को लागि केहि संयुक्त राज्य अमेरिका र यूनिट रूपांतरण को तहत उपयोगी छ।
वक्र संख्या: यो SCS गणना गर्न प्रयोग समीकरण मा कुनै भेरिएबल समाधान गर्दछ।
LNP3: प्राकृतिक Logarithm को एक दमन मा एक बिन्दु x को सम्भावना को समाधान।
PChartz: Psychrometric ग्राफ तापमान को तापमान, सापेक्ष नमी र अन्य जडी बूटी को गणना गर्न को लागि पनि धूम्रपान।
प्रयोगकर्ताहरू: यो ईन्जिनियरि students विद्यार्थीहरूको लागि एक उत्तम उपकरण हो। वस्तु, दबाव, समय, तापमान, शक्ति, इत्यादि सहित विभिन्न एकाईहरू रूपान्तरण गर्दछ।
Zucons: यो उपरोक्त उपकरण माथि छ, तर यसले अनलाइन सञ्चालन गर्दछ।
नि: शुल्क एक ठूलो काम, स्वतन्त्र हुन। जबकि केहि वर्तमान छैनन्, यो लायक छ एक जोडी को दोश्रो फिर्ता लौटें कृतज्ञतामा।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो ट्रिमबलले अशटे खरीद गर्छ; हामी के आशा गर्न सक्छौं
अर्को पोस्ट फास्टकैड, एक ओटो सीएडी छायाअर्को »
२ जवाफ "CAD / GIS का लागि जोनमको सर्वश्रेष्ठ" लाई जवाफ दिईन्छ।
मलाई थाहा छ कि त्यहाँ स्वत: सिर्जनामा ​​मेरिडियन्सहरू र समानान्तरणहरू सिर्जना गर्न कुनै दमन छ भने
अभिवादन, तपाई मलाई EPANET कस्तो प्रकारको निर्देशा use्कहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ? तिनीहरू एक्स, वाई, तर जुनबाट: यूटीएम, भौगोलिक-दशमलव, कार्टेसियन, जुन। धन्यवाद…